Fandaminana Katekomena 2009 tarika Finoana – FJKM Ambavahadimitafo Fandaminana Katekomena 2009 tarika Finoana |
Fandaminana Katekomena 2009 tarika Finoana
Publié le 12 novembre 2009 à 12:11
Ilazana ny Diakona manana katekomena iandraiketana fa ny Katekomena tarika « Finoana » , tarika zandriny dia hanantanteraka fanadinana ny Asabotsy 14 Novambra 2009 ho avy izao. Ny fotoana izay hanaovany fanadinana dia efa natao petan-drindrina ao amin’ny trano fisainana , koa ny diakona dia iangaviana hijery izany lisitry izany ao amin’ny trano fisainana .
Ny Alahady 15 Novambra 2009 kosa no haseho eto amin’ny mpihevi-draharaha ireo katekomena ireo ka tokony ho tonga amin’izany ny diakona mpiahy azy ireo. Marihina fa amin’ity taona ity dia tokony atao an-tsoratra ny tatitra izay ataon’ny diakona mpiahy. Izany moa dia hanatevenana ny arsivan’ny fiangonana .
Ny Alahady 22 Novambra 2009 no entina ankatoavin’ny mpandray ireo katekomena tarika finoana ireo.